Sida loogu sheego qof inuu ku jecel yahay | Niman qurux badan
In aad qof u sheegto in aad 'jeceshahay' waxa ay noqon kartaa qaab ama odhaah sidaas lagu yiraahdo. Laakiin qaarkood waxay noqon kartaa shay aad u adag waayo ma garanayaan sida ay dareenkooda u muujiyaan si sax ah. Way adkaan kartaa sababtoo ah waxaa jira dad aan aqoon sida daacadda ah taasina waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn.
Mana aha oo kaliya sida loogu sheego qof inuu ku jecel yahay, laakiin waqtiga sida loo sheego. Way adkaan kartaa xidhiidhka saaxiibtinimada, marka foomamka la kaydinayey aanay danaynaynin waxaad rabtaa inaad tillaabo dheeraad ah aado. Goorma ayaa ugu fiican inaad qirato jacaylkaaga?
1 Sidee qof loogu sheegi karaa inuu ku jecel yahay?
2 Talaabooyinka fudud ee laguu sheego
3 Sida fariin loogu sheego qof aad jeceshahay
4 Sida looga falceliyo ka dib markaad u qirato qof aad jeceshahay
Sidee qof loogu sheegi karaa inuu ku jecel yahay?
Sida ugu wanaagsan ee aad ugu sheegi karto qof aad jeceshahay waa iyadoo la adeegsanayo daacadnimo oo tan loo sameeyo fool ka fool. Shaki la'aan waa habka ugu saxsan uguna jaceyl ee loo sheego iyo oo aan ku samayn qoraal. Waxaan aad u isticmaalnaa shabakadaha bulshada taasina waxay noqon kartaa mood iyo qalab lagu awoodo inaan wax walba sheego. Xitaa inaad u sheegto qof ay ku jecel yihiin waxaa laga yaabaa inaysan run ahayn.
In kasta oo aanay taasi u muuqan, haddana waxa la qoray waa in wax la yidhaahdo ama aan la dareemin, mar haddii erayada dabayshu kaxayso. Sida ugu wanaagsan ee aynu soo sheegnay waa jir ahaan iyo daacadnimo xilligan. Ahaanshaha wax aan caadi ahayn, hubaal marka aad si rasmi ah u sameysid wax la mid ah, waxaad ka sheegaysaa qalbiga.
By daacad ah wax aad u qurux badan qanacsanaanta weyn ayaa la abuuray Qofka kale, waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax jawaab ah, sababtoo ah waxay ku curyaameen fariinta, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inaysan noqon doonin wax la yaab leh.
Talaabooyinka fudud ee laguu sheego
Waa inaad maskaxdaada ku abuur wax qurux badan oo xafid. Farriinta kama bixi doonto oo keliya erayadaas fudud, laakiin waxaa lagu qurxin doonaa wax aad u qurux badan oo ay tahay in la is waafajiyo.
Si aad ugu ekaato daqiiqad aan la ilaawi karin oo macquul ah, waa inaad qofkaas isha ka fiiri oo aad ilaaliso qaab dabacsan, maadaama halkan aan mar hore bilawnay inaan isticmaalno fariinta aan afka ahayn. Marna ma rogtid wejigaaga ama gacmahaaga ma leexin, waxaa laga yaabaa inaanay run u muuqan. Haddii aad kalsooni ku filan ku leedahay qofkaas, waxaad u sheegi kartaa si dhow, xitaa iyada oo la adeegsanayo tilmaanta yar ee taabo meel kasta oo jidhkaaga ka mid ah.
Iska ilaali inaad isticmaasho noocyada kale ee weedho ama kelmado beddel waxa ku jira, fariintu waxay u muuqan kartaa mid qosol leh qofka kale. Had iyo jeer waa in aad dhex gasho dareenka iyo awoodda lagu kala qaado si gaar ah.
Ha isticmaalin dagaal weyn oo ereyo ah ama wada hadal aad u wanaagsan si aad u gaadho xirmada su'aalaha. Way fiicantahay in la isticmaalo erayada saxda ah, si kooban iyo mar walba toos u gaadh barta. Haddii aad qurxiso wax kasta oo aad rabto in aad tiraahdo, waxaa laga yaabaa in aad lumiso kalsoonida waxa aad rabto in aad u gudbiso jidka.
Sida fariin loogu sheego qof aad jeceshahay
Had iyo jeer waxaad wax ka weydiin kartaa habka aad tahay iyo sida aad u dhaqmayso marka aad midowdo qof ahaan ama fariin ahaan. Midka fudud iyo maalin kasta Had iyo jeer waa habka ugu fiican ee aan xaaladda la xad-dhaafin, dadku ma door bidaan caqabadaha ama dhibaatooyinka.
Ma aha inaad bilowdo inaad qof aad jeceshahay u sheegto "waan ku jeclahay" ama "waan ku jeclahay" sababtoo ah waxaad abuuri kartaa xaalad curyaan ah iyo jawaab taban. Waa in ku geli erayo qurxoon, emojis iyo wax kasta oo aad u malaynayso inuu jeclaan lahaa, iyo dhamaadka, soo bandhig ereyga "aad baan ku jeclahay", marka aad leedahay in la xiro wada hadalka.
Sida looga falceliyo ka dib markaad u qirato qof aad jeceshahay
Tani waa qayb muhiim ah oo macluumaad ah, sababtoo ah waxay u muuqan kartaa inuu yahay qofka kale oo aan garanayn sida looga falceliyo. Laakiin kiiskan waa sida uu qofku uga falcelinayo taasi waxay soo saartaa fariinta, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaadan helin jawaabta saxda ah.
Ha niyad jabin Haddii qofka kale uu kuugu jawaabay si xun ama uusan la wadaagin dareenkaaga la mid ah. Waxaa muhiim ah in aad diirada saarto in waxa aad sheegtay aysan ahayn arxan darro, balse ay ahayd wax cajiib ah. Sidoo kale, qofka kale waa inaad dareentaa mahadnaq in qof doonayo in uu la wadaago dareenkiisa.
Jawaabahaaga ugu fiican Waxay noqon karaan "mahadsanid inaad i dhegaysato", "dhib ma leh" oo waligaa ha isticmaalin kuwa kaa xumaanaya sida "qofna weligiis ima jeclayn" ama "Waan ogaa inay tani dhici karto". Ha u dareemin dambi inaad muujiso dareenkaaga, farsamadani waxay kaa caawin doontaa inaad xoojiso xiriirka mustaqbalka si aad u wanaagsan iyo inaad yeelato kalsooni dheeraad ah.
Haddii qofka aad jeceshahay uu la wadaago dareen isku mid ah, waa inaad aad u mahadsantahay oo u dabaal dag wakhtigaas si habaysan farxad iyo raynrayn. Hadda waa waqtigii aad wadaagi lahayd wax kasta oo aad dareento Bilawga xiriirka oo raaxayso. Si aad wax walba u koraan oo u noqdaan kuwo xoog badan, waa inaad u ogolaataa wax walba inay u socdaan adoon ku qasbin waxna si tartiib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loogu sheego qof aad jeceshahay